Akụkọ - Jiri obi ụtọ nabata Maazị Paul Wang, Onye isi oche nke C&W International Fabricators nke United States ka ọ bịa leta ụlọ ọrụ anyị, wee nye ọrụ anyị ọrụ nduzi.
Na 9: 00am na March 7th, Paul Wang, Onye isi oche nke C & W International Fabricators nke United States, yana Zhong Cheng, onye njikwa nke alaka Shanghai, bịara Cepai Group maka nleta na nyocha. Maazị Liang Guihua, Onye isi oche nke Cepai Group, jiri ịnụ ọkụ n'obi soro ya.
Kemgbe afọ 2017, ahịa ngwaahịa mmanụ na ụlọ na mba ụwa agbakeela, yana mkpa maka akụrụngwa mmanụ ala, valvụ na ngwaahịa ngwa ahịa n'ahịa mba ọzọ amụbaala, nke wetakwala Cepai Group iji nweta ohere na nsogbu ọhụụ.
Ohere dị na iwu na-aba ụba, ebe ihe ịma aka dị na mkpa ọ dị iji melite ike zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ mgbe niile iji merie mgbanwe ahịa na-agbanwe.
Onye isi oche Wang, ya na ndị ọrụ teknụzụ, ogo na njikwa njikwa nke Cepai Group, jiri nlezianya gaa ma nyochaa usoro niile site na akụrụngwa ruo na mmecha, ọgwụgwọ ọkụ, nzukọ na nyocha. N'otu oge ahụ, ọ attentionara ntị na ọgwụgwọ ọ bụla. usoro mmepụta iji hụ na ogo 100% ruru eru nke ngwaahịa na ngwa.
Onye isi oche Wang nwere obi ụtọ na afọ ojuju na usoro nyocha niile. Ọ tụkwasịrị obi kpamkpam na ikike mmepụta na mmesi obi ike nke Cepai, wee gosipụta njikere ya iso anyị nwee mmekọrịta ogologo oge. Cepai ga-abụkwa icing na achicha ahụ na njikọ nke ụlọ ọrụ C&W!